Magweta emhuri epamhuri muNetherlands - Law & More
Dzimwe nguva unogona kutarisana nenyaya yemutemo mumunda wemutemo wemhuri. Nyaya iri pamutemo zvakanyanya mumutemo wemhuri tsika ndeyekurambana. Rumwe ruzivo nezve mafambiro ekurambana uye magweta edu ekurambana anogona kuwanikwa pane yedu kurambana peji. Pamusoro pekurambana, unogona zvakare kufunga, semuenzaniso, kucherechedzwa kwemwana wako, kuramba kuva mubereki, kupihwa kodzero yekuchengeta vana vako kana nzira yekutora…
Chinhu chakakosha pakuziva mwana wako, isarudzo yezita. Kana iwe uchida kusarudza zita remwana wako panguva yekubvuma, iwe nemumwe wako munofanira kuenda kumasipala pamwe chete. Kana mwana apfuura makore gumi nematanhatu panguva yekubvuma, mwana anosarudza zita raanoda kuva naro.
Ukabvuma mwana, unova mubereki zviri pamutemo wemwana. Iwe unozobva wave nekodzero shoma uye zvisungo. Kuti uve mumiriri wemutemo wemwana, unofanirawo kunyorera chiremera chevabereki. Kutenda kwemwana zvinoreva zvinotevera:
• Iwe nemwana munova vadyi venhaka zviri pamutemo.
Kusiyiwa kunoitwa kumatambudziko maviri ekupedzisira apo amai vanga vasina kutendeka pamusoro pababa vemwana chaivo.
• Unogadzirisa mari yemwana uye nezvimwe;
Chikumbiro chekuisa mwana wako kunze kwemusha chinogona kuendeswa kuMutongi weVana neVechidiki Kuchengetwa kana neChirongwa cheKuchengetedzwa kweVana uye Kudzivirirwa. Kune mhando dzakasiyana dzekubuda. Semuenzaniso, mwana wako anogona kuiswa mumhuri yekurera kana imba yekutarisira. Izvo zvakare zvinoita kuti mwana wako aiswe nemhuri.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvakakosha kuti iwe unogona kuhaya gweta raunovimba naro. At Law & More, zvaunofarira uye zvemwana wako ndizvo zvakakosha. Kana iwe uchida rubatsiro mune ino maitiro, semuenzaniso kudzivirira mwana wako kubva pakuiswa kure nemba, wauya kurudyi nzvimbo. Magweta edu anokwanisa kukubatsira iwe nemwana wako kana chikumbiro chekubuditswa chatumirwa, kana kuti chingaendeswa, kuMutongi weVana.